मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्‍यो सचिवको व्यापक सरुवा: कसको सरुवा कहाँ भयो ? - Himal Dainik
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्‍यो सचिवको व्यापक सरुवा: कसको सरुवा कहाँ भयो ?
३० आश्विन २०७७, शुक्रबार ०७:५६
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पछिको पहिलो बैठकले सचिवको व्यापक सरुवा गरेको छ। बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सचिवको सरुवा गरेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा यादव कोइरालाको सरुवा भएको छ। हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत रहेका कोइरालाको यसअघि सामान्यबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो भने त्यहाँबाट पनि छोटो समयमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा भएको थियो।
त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमको सरुवा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा भएको छ। युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ल्याइएको छ।
उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा केदार न्यौपानेको सरुवा भएको छ। न्यौपाने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत थिए। उपराष्टपति कार्याल्यका सचिव खगराज बराललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय तानिएको छ।
जल तथा ऊर्जा आयोगमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीको सरुवा भएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रमान श्रेष्ठलाई लगिएको छ। उर्जा आयोगमा कार्यरत सचिव रमेशप्रसाद सिंहलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका मधुसुदन अधिकारी, उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा लगिएका छन्।
केदार बहादुर अधिकारीको अनिवार्य अवकासपछि खाली रहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवका रुपमा एकनारायण अर्याललाई लगिएको छ। उनी काठमाडौं महानगरपालिकामा सचिवका रुपमा कार्यरत थिए।
अघिल्लोचाडपर्वलाई लक्षित गरी निषेधाज्ञा
पछिल्लोकोरोनाबाट बाँकेमा थप एकको मृत्यु